Ukuguqula iifayile ze-AutoCAD ze-2009 kwi-Microstation V8-Geofumadas
NgoSeptemba, 2008 AutoCAD-AutoDesk, IntelliCAD, Microstation-Bentley
Ndifumana ingxaki kumchwepheli usebenzisa i-Microstation V8, ndikhangele ukufunda i-AutoCAD ifayile 2008.
Ifomathi ye-dwg yayisetyenziswe ekuqaleni yi-Interactive CAD, ephuhlisiwe Mike Riddle Kwiminyaka ye-70, lo ngumnye wabalingisi-basebenzi be-AutoDesk oqalise igama elifanayo lokwandisa kwiifayile zeCADCAD kunyaka we-1982.
Ifoto ibonisa le nguqulelo ye-Jurassic ye-Interactive CAD, yabona ukuba sele iphethe imouse, kunye nalawo macwecwe asetshenziselwa ukukhangela kwaye kwacetyiswa ukuba isebenzise izilwanyana ezimbini nakuba iileta eziluhlaza zihlala ziyenza kwiinyanga ze-3 ukusebenzisa iiglasi Culo e bhotile.
Ukususela kwi-82 ukuya kunyaka 2007 AutoDesk uye wadala iinguqu ezihlukeneyo, ubuncinane i-18 zibhekwa njengeenguqu ze-transcendental zabo Iminyaka eyi-25 yembali. Kuquka zamvanje 2007, 2004, 2002, 2000 kunye R14 iinguqulelo kwaye ukuba isicelo ukuthintela ubunjineli umva nangona sele wagxeka njengoba ukungabi ukusebenziseka.
La Vula iNdibaniso yoBumbe, ngeengcamango ze-IntelliCAD zaqala ukukhulula izicelo ezivela kwi-1998 ezazisetyenziselwa le fom ye-dwg, ngoko-ke i-Autodesk ifake imfuno kubo ukusebenzisa i-tactics ye-engineering inyaka we-2006.
I-opera isepha yi hayi ngaphezulu, Microstation waqalisa ukufunda nokubhala natively kwi DWG ifomathi kuguqulelo 8, 2004 ngonyaka. 2007 version angafundwa Microstation 8.9 eyaziwa ngokuba XM, kuphela kusoloko ngaphandle baguqukele DGN.
Izindlela ezintathu zokukwenza
Ngoko uphendula umbuzo, kukho iindlela ezimbini zokufunda ifayile ye-dwg nge-Microstation V8.
Eyokuqala kuvulelekile kunye AutoCAD 2008, emva kokwenza "Wefayile / Export / Rhweba format AutoCAD / 2004", ngaleyo ndlela uya kufunda Microstation V8
Indlela yesibini ukuyivula nge-AutoCAD 2009, ngoko wenze "fayile / ukuthumela / ukuthutha i-V8"
Owesithathu uvula nge-Microstation XM, ongayilanda kuyo, kwaye isebenza kuwe kwiiseshoni zeemizuzu ye-15. Le nguqulo ibonisa ifomathi ye-2008 ye-dwg ngaphandle kokuyiguqula ukuze idibanise. Emva koko ungayigcina njenge-dgn, "fayile / gcina njenge / dgn V8"
Emva kokusayinwa yesivumelwano phakathi AutoDesk ne Bentley, ukusuka kuguqulelo elandelayo AutoCAD kunye Microstation 2010 Athens kulindeleke ukuba zombini iinkqubo usebenzisa standard report format noko kulindeleke ukuba ungagcina okuninzi yezigidi kubiza ukusebenzisana ezi nkampani zimbini.
Okwangoku uchwephesha, libiza i-1 ilixa lokuthutha ukukhangela i-intanethi ye-intanethi, imizuzu ye-22 yoxhumo olude kakhulu ukundithumela ifayile kunye nemizuzu ye-4 yam ekuseni.
Hayi ... ayibizi izigidi, kodwa ayifaki ukulinganisa ixesha elifunekayo lokubuyela kwindawo yolu vavanyo, ukuba isiphepho esithintela indawo siyivumela ezi zibonakaliso zeziphepho.
Post edlulileyo«Edlulileyo Kutheni ba tyelela
Post Next Umsebenzi wezakhono zeGISOkulandelayo "
Iimpendulo ze-6 "Ukuguqula iiFotCAD ze-2009 Files kwi-Microstation V8"
Andazi ukuba uthetha ukuthini ngokuzenzekelayo. Ukuba uthetha ngokwenza ibhloko (uninzi ngendlela enkulu), eyona nto ilungileyo kuku Microstation omnye.
I-version yezilingo ikuvumela ukuba wenze oko, usebenzisa i-converter ye-batch, unqume ukuba yiziphi iifayile, ifomathi oyithumelayo, kwaye wenze utshintsho olukhulu.
Ndiyaqonda ukuba ukuthumela ngaphandle kuyenza i-2007, ukuze kubekho ingxaki.
Alberto Jimenez uthi:
Ndifuna inkqubo eyenza imidwebo ye-Microstation V8, kwi-Autocad 2008 ngokuzenzekelayo.
Ndiyifumana phi na?
Ukuphendula umbuzo ofika kum ngeposi
Ziziphi iinguqu ze-AutoCAD eyenziwa yi-Microstation?
I-Microstation i-V8.5 isekela iifayile zangaphambili ze-dwg / dwf kwaye ifike kwi-AutoCAD 2004, kuba yinto ekhona kuloo mhla.
I-Microstation i-V8.9 XM isekela i-dwg / dxf ukuya kwi-AutoCAD 2007
Microstation V8i 1 Khetha Series ixhasa iifayile DWG / DXF ukuya AutoCAD AutoCAD 2010 2012
Hayi, iphela ithumela ngaphandle kwiinguqulelo zeDWG zangaphambili.
Kodwa iyanconywa kakhulu, igcina indawo ye-autocad 2009 (ibhonobhoni), kwaye ikuvumela ukuba ulinganise imida, indawo, ulungiselele ukuthumela ngaphandle nokuguqulwa, ukuprinta kwinqanaba, ukujonga umboniso ohlukeneyo ... .etc
Ngokuqinisekileyo kuyisityebi esihle kubo bafuna ukujonga iifayile ze-DWG ngezikhathi ezithile, kwaye ngenxa yokuba ikhululekile, gwema ukusebenzisa izixhobo ezingekho mthethweni ze-AutoCAD
Siyabonga I-Txus, i-sometimes-esque ibhetele ukubala imilenze yeenkomo kwaye izahlula ezine.
Omnye umbuzo, ukuguqula kwenye ifomati njengokuba ugxile?
ngenye indlela kuya kufuneka kuguqulwe kwi-2004 kwimeko yokusebenza kwethu, kuba umntu owufundayo ngumsebenzisi we-Microstation V8
Akukho mfuneko yokuba uvule i-autocad 2008 okanye i-2009 kwaye ugcine kwiinguqulelo zangaphambili, kwaye akukho mfuneko yokukhangela kwiinguqulelo ze-microstation xm "phaya" ... 🙄
Nceda ukhuphele mahala kwiwebhusayithi ye-autodek, i-DWG TrueView, equka i-DWG TrueConvert.